मकैको अर्कै खेती !- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — हाम्रो स्कुलमा एक वर्ष नेपाली र एक वर्ष अंग्रेजी नाटक मञ्चन गर्ने परम्परा बसाएको छ । त्यसैअनुसार यस वर्ष नेपाली विभागले सञ्जीव उप्रेतीद्वारा रचित नाटक ‘मकैको अर्कै खेती’ को मञ्चन गर्ने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै पात्रहरू छानियौं । हरेकको भूमिका तय भयो ।
त्यसपछि अभ्यास पनि सुरु भयो । हामी २७ विद्यार्थी कलाकारका रूपमा छानिएका थियौं । मैले प्रमुख पात्र लेखकको भूमिका पाएको थिएँ । त्यसअनुसार मैले लेखकको संसारमा डुबेर लेखकीय पीडालाई महसुस गर्नुपर्ने भयो ।
पश्चिमेली उत्तरआधुनिक शिल्पशैलीको यो नाटकले नेपाली समसामयिक सन्दर्भलाई व्यंग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले विसं. १९७७ मा लेखेको ‘मकैको खेती’ कै आधारभूमिमा रचित यस नाटकमा लेखकलाई मकैको अर्कै खेती पुस्तकले भ्रम फिँजाएको झूटो आरोपमा मुद्दा चलाइन्छ । लेखकको अस्मितामाथि नारीवादी अधिकारकर्मी, तेस्रोलिंगी, प्रकाशक, मानवअधिकारवादी, इतिहासकार, अनुवादक, समालोचक तथा उपेक्षित समुदायका विभिन्न पक्षधरदेखि भट्टीपसलेसम्मले धावा बोल्छन् ।
नाटकमा भेष बदलेको न्यायाधीश नै अनुसन्धान अधिकृत र घाटे ब्राह्मणको रूपमा प्रस्तुत भएर लेखकको दाहसंस्कार गर्ने आदेश दिन्छन् । अनेकन तानाबाना बुनेर उसलाई जिउँदै जलाइन्छ । ‘सिर्जनाको जन्म नै स्रष्टा वा लेखकको मृत्युको कारक’ भन्ने फ्रान्सेली दार्शनिक रोला बार्थको मान्यतामा आधारित नाटकमा लेखकलाई जलाए पनि उसको विचार भने अमर हुने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
समसामयिक समाजको सजीव चित्रण गरिएको यो नाटक मञ्चन गर्नु त्यति सहज थिएन । हामी सबै पात्रले त्यो चुनौती सामना गर्ने दृढ अठोट गर्‍यौं । अधिकांश कलाकारको अभिनय–अनुभव थिएन । त्यसैले हामी सबैले शून्यबाटै अभ्यास सुरु गर्‍यौं । अभ्यासका क्रममा विभिन्न अप्ठेरा आए । पात्रमा घुसेर अभिनय गर्नु सजिलो थिएन । अझ कहिल्यै नपुगेको अदालत र आर्यघाटका काजकिरियाहरूको अभिनय सबैभन्दा गाह्रो थियो । नाटकलाई जीवन्त बनाउन हरेक कलाकारले उत्तिकै श्रम परेको छ । फरकफरक पात्रका रूपमा अभिनय गर्दा हरेकलाई बेग्लै अनुभूति पनि भएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा, मैले यो नाटकबाट धेरै सिक्ने अवसर पाएँ । अभिनयसँगै नेपाली समाजको कटु यथार्थ नियालेर हेर्न पाएँ । लेखकलाई कसरी दोहोलो काट्छन् भनेर महसुस गर्न पाएँ । सामान्य लेखक कसरी शब्दको खेती गर्नेहरूले बिछयाएको जालमा फस्छन् भन्ने थाहा भयो । नाटकको मागअनुसार शारीरिक र मानसिक रूपमा आफैंलाई परिवर्तन गर्दा आफू पनि त्यस्तै पीडित लेखक भएको आभास भयो ।
मेरा सहकर्मी नाटय–अभिनेता/अभिनेत्री मित्रहरूको सशक्त अभिनयले हामी नाटय संसारमा हराउन थालिसकेका थियौं । सम्झँदा आज पनि आफू अझै त्यही संसारमा छु जस्तो लाग्छ । मकैको अर्कै खेतीले हाम्रो मन मस्तिष्कमा अर्कै छाप छोडेको छ ।
डेढ महिनाको निरन्तर अभ्यासपछि हामी नाटक मञ्चन गर्न तयार भयौं । हल्का डर, मनमा खुलदुली र अपार उत्सुकता लिएर हामी मञ्चमा प्रस्तुत भयौं । हाम्रो आफ्नै स्कुलका अतिरिक्त दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमाझ भदौं ५ देखि ८ गतेसम्म लगातार ४ दिन नाटक मञ्चन गरिएको थियो । उक्त अवधिभर पाएको दर्शकको साथ, उत्साह र प्रशंंसाले हाम्रो परिश्रम र मिहिनेत खेर नगएको महसुस भयो । लेखक सञ्जीव उप्रेतीले हाम्रो प्रयासलाई जसरी खुला हृदयले हौस्याउनुभयो, त्यसले हामीमा थप ऊर्जा भरिएको महसुस भयो । आत्मविश्वास यसरी बढयो कि अब हामीलाई जस्तोसुकै नाटक पनि मञ्चन गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ । नाटकको निर्देशन नेपाली विभागका शिक्षकहरू ज्ञानप्रसाद आचार्य, प्रिया पौडेल, प्रेमनारायण भुसाल, बाबुराम लम्साल, गणेश तिमिल्सिना र हरिशरण ढुंगानाले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो । नाटक सफलतापूर्व मञ्चन गर्नमा प्राचार्य केशरबहादुर खुलाल र नाटककार उप्रेतीलगायतको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहयो ।
किसन कुँवर, कक्षा–१२
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३४
भाद्र १७, २०७५ जितेन्द्र साह
काठमाडौँ — तीन वर्ष, तीन जाँच, आउन नदिऔं,बच्चाको आँखामा कुनै आँच नानीबाबुको आँखामा रोग लाग्न नदिन मोरङ र सुनसरीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालित अभियानको नारा हो यो । सीमावर्ती रानीस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालले स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला समन्वय समिति, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आफ्नै केन्द्रहरू र भीडभाड हुने थलोमा यो जनचेतनामूलक सामग्री टाँसेको छ ।
जन्मेपछि, हिँड्न थालेपछि र विद्यालय जानुअघि बालबालिकाको आँखा अनिवार्य जचाउनुपर्ने सन्देश गाउँगाउँ पुर्‍याइँदै छ । ‘जन्मैदेखि नै दुवै आँखाको सुरक्षा आवश्यक छ,’ अस्पतालका प्रबन्धक कुमार पृथु भन्छन्, ‘जानकारीको अभाव र लापरबाहीले बालबालिकाको आँखामा जटिल प्रकृतिका समस्या देखिन सक्छन् ।’ यस्तो अवस्था आउन नदिन अभियान नै चलाउनुपरेको उनले बताए ।
बालबालिका अस्पतालमा आउन प्रेरित हुन् भनेर जाँच कक्षबाहिर थरीथरीका खेलौना राखिएका छन् । अस्पताल परिसरमा पिङ, चिप्लेटीसहितको बाल बगैंचा छ । बालबालिकाको रुचिअनुरूप अस्पतालभित्रै गुणस्तरीय र स्टायलिस चस्मा उपलब्ध छन् । तर चस्माले पनि काम गर्ने अवस्था पार गरेमा बालबालिकामा ‘अल्छी आँखा’ (एम्प्लोपिया) रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन् । यो रोगमा आँखा कम चल्ने, कम देखिने र डेढो हुन्छ । यो चरणमा आइपुगेपछि चस्मा लगाउँदा पनि राम्ररी देखिन्न । ८ वर्षदेखि १५ वर्षभित्रको उमेरसम्म उपचार गरिएन भने एउटा आँखाले पूरै देख्न छाड्छ । वंशाणुगत, पोषणमा कमी, जन्मिँदा कम तौलको हुनु र चोटपटक लागेमा यस्तो समस्या आउँछ ।
एउटाको उपचार भएन भने अर्को आँखा पनि पूरै बिग्रन्छ । अध्ययनअनुसार १५ प्रतिशत बिरामीमा दुवै आँखा बिग्रेको पाइएको छ । आँखालाई जोगाइराख्न पटाका नपड्काउने, धारिलो/तिखो वस्तुले नखेल्नेजस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार निकै नै ढिलो भए डेढो भइसकेको आँखालाई पनि बाहिरबाट सामान्य देखिने गरी सिधा पार्न त सकिन्छ तर ज्योति नफर्कन पनि सक्छ ।
जन्मेपछि आँखामा चोटपटक लागेमा, शिशु गर्भमा हुँदा आमाले पोषण नपाउँदा, आमालाई संक्रमण हुँदा र वंशाणुगत कारणले बालबालिकामा पनि मोतीबिन्दु हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । मोबाइल गेमको प्रभावले पनि पछिल्लो समय कलिला बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने समस्या बढ्दो छ । अस्पतालका कार्यक्रम निर्देशक एवं कोर्नियाविज्ञ डा. सञ्जय सिंह भन्छन्, ‘अहिले बालबालिका आउटडोरभन्दा कोठाभित्रै कम्प्युटर, टयाबलेट, ल्यापटप र मोबाइलमा खेलिने इन्डोर गेममा बढी रमाउँछन् । यसबाट पनि आँखाको दृष्टि कमजोर हुन्छ ।
आँखालाई स्वस्थ राख्ने उपाय :
-दिनहुँ हरियो तरकारी, साग र फलफूल खाने ।
-आँखा रातो/संक्रमित भएकाको नजिक नजाने, सम्पर्कमा नरहने
-घाम र धुलोमा निस्कँदा कालो चस्मा लगाउने ।
-खेल्दा धारिलो/तिखो वस्तुबाट टाढै रहने ।
-धुलो कसिंगर पर्दा नमाड्ने, सफा पानीले धुने
-धेरै नजिकबाट टीभी नहेर्ने । हरेक २० मिनेटमा २० सेकेन्डका लागि आँखालाई आराम दिने
-मोबाइल/टयाबलेट/कम्प्युटर लगातार २०/३० मिनेटभन्दा बढी नचलाउने
-चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आँखाको नियमित व्यायाम गर्ने